विज्ञान तथा प्रबिधी Archives - खबरदारी न्युज
कृषी तथा वातावरण
विज्ञान तथा प्रबिधी
विज्ञान तथा प्रबिधी समाचार समाज
बैंकमा नगद झिक्न अब क्यूआर स्क्यान गरे पुग्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था डिजिटलाइज हुने क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । पहिले चेकबुकबाट मात्र नगद निकाल्न सकिने व्यवस्था थियो भने त्यो सेवा परिष्कृत हुँदै जाँदा एटीएम प्रणाली सुरु भयो ।
त्यस्तै अब बैंकबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी नगद निकाल्न सकिने भएको छ । पछिल्लो समय यस्तो सेवा नेपालका अधिकांश बैंकहरुले सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
क्यूआर कोडको माध्यमबाट नगद निकाल्न ग्राहक आफ्नो खाता भएको बैंकमा जानुपर्छ । टेलरमा आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपबाट क्यूआर स्क्यान गरी नगद निकाल्न सकिने सुविधा दिइएकाे छ ।
ग्राहकले निकाल्न चाहेको रकम सो टेलरमा बस्ने कर्मचारीले कम्प्युटरबाट स्वीकृत गरी ग्राहकलाई नगद दिनेछन् । यसले गर्दा बैंकमा एटीएम कार्ड वा चेक नलगी नगद निकाल्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकलाई क्यूआर कोडका माध्यमबाट दिनमा बढीमा दुई लाख नगद दिने मिल्ने व्यवस्था ल्याएको छ भने महिनामा १० लाख नगद दिन सक्नेछन् । दैनिक नगद निकाल्ने सन्दर्भमा भने सबै बैंकका आ-आफ्नै नियम छन् ।
टेकपानासँग कुरा गर्दै नबिल डिजी बैंक (नबिल बैंक) का प्रमुख निरज शर्माले बैंकमा उपलब्ध भएको क्यूआर कोड स्क्यान सेवाले ग्राहकको चेक वा एटीएम बिर्सिएको वा हराएको खण्डमा ग्राहकले सहजै नगद निकाल्न सक्ने बताए ।
कतिपय अवस्थामा बैंकको एटीएम मसिनले काम गर्दैन भने कतिपय अवस्थाममा ग्राहकको एटिएम कार्डमा समस्या आएको हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो खाता भएको बैंकबाट चेक प्रयोग गरी नगद निकाल्न जाँदा हस्ताक्षर नमिल्ने हुनसक्छ ।
नगद तुरून्त आवश्यकता परेको अवस्थामा ग्राहकले सहजै क्यूआर कोड स्क्यान गरी केही मिनेटमै नगद निकाल्न सक्छन् । हाल आफूले जुन बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गरेको छ, त्यसैबाट मात्र क्यूआर कोड स्क्यान गरी नगद निकाल्न सक्नेछन् ।
शर्माले भने, ‘ग्राहकले जुनसुकै बैंकबाट केही शुल्क तिरी क्यूआर कोड स्क्यानबाट नगद झिक्न सक्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकसँग पहल गरिरहेका छौं ।’
नेपाली युनिकोडमा टाइप गर्ने सजिलो तरिका
काठमाडौं । ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा सिधै नेपालीमा टाइप गर्नुपर्‍याे भने के गर्ने ? विकल्पहरू त टन्नै छन् । तर सजिलो उपाय के होला ? आज म यिनै कुराको जवाफ लिएर आएको छु ।नेपाली युनिकोड किन जरूरी छ वा यसको महत्व के छ ? कुरा यहीँबाट सुरु गरौं । युनिकोड भनेको युनिभर्सल कोड हो । जब हामी नेपाली अक्षरलाई युनिकोडमा लेख्छौं, त्यो गुगल वा इन्टरनेटको दुनियाँले पनि सहजै पहिचान गर्न सक्छ ।
यसैकारण हामीले समाचारहरू नेपाली अक्षरमा पढ्न सक्छौं । इन्टरनेटमा केही कुरा खोज्नुपर्यो भने नेपाली भाषामै खोज्न सक्छौं । मोबाइलमा त यसका लागि विभिन्न किबोर्डहरू छन् ।
उदाहरणका लागि हाम्रो किबोर्डलाई लिन सकिन्छ । जसले हामीलाई मोबाइलबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्न एकदमै सजिलो बनाएको छ । ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट पनि सजिलै युनिकोडमा लेख्न मिल्ने टुलहरू टन्नै विकास भएका छन् ।
अहिले विभिन्न वेबसाइट बनेका छन्, जसबाट हामीले रोमनमा नेपाली टाइप गर्न सक्छौं । नेपाली फन्टमा भएका अक्षरहरूलाई एक क्लिकमै युनिकोडमा रूपान्तरण गर्न पनि सक्छौं । जसको लागि इन्टरनेटको जरूरत भने पर्छ ।इन्टरनेट नहुँदा माइक्रोसफ्ट वर्डमा नेपाली फन्ट सेलेक्ट गरेर पनि पनि नेपाली अक्षरहरू लेख्न त सकिन्छ । वा विण्डोजमा ल्याङ्वेज सेटिङमा गई नेपाली युनिकोड छनौट पनि गर्न सकिन्छ ।
तर सधैं नेपाली युनिकोडमा टाइप गर्नका लागि भने मदन पुरस्कार पुस्तकालयले काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्ववदयलय लगायतसँग सहकार्य गरी विकास गरेको नेपाली युनिकोड टुल एकदमै सजिलो र भरपर्दो छ ।
नेपाली टाइपिङ जान्ने र नजान्ने दुवैका लागि यो टुल निकै उपयोगी छ । प्रिति वा अन्य फन्टमा टाइप गर्ने बानी छ भने Nepal Unicode Traditional र बानी छैन भने Nepali Unicode Romanized टुल चलाउन सकिन्छ ।
आज म भिडिओमार्फत् यो टुल कहाँबाट डाउनलोड गर्ने ,कसरी इन्स्टल गर्ने र चलाउने भनेर जानकारी दिँदैछु ।
Science विज्ञान तथा प्रबिधी समाचार
५० वर्षअघि आजकै दिन इन्टरनेटबाट पठाइएको थियो पहिलो म्यासेज
काठमाडौं । ५० वर्षअघि आजकै दिन (२९ अक्टोबर, १९६९) इन्टरनेटमार्फत दुई अक्षर एक कम्प्युटर अर्को कम्प्युटर पठाइएको थियो । जसले जानकारी बाँड्ने र सञ्चार गर्ने तरिकालाई आमूल परिवर्तन गर्‍यो ।
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका प्राध्यापक लियानार्ड क्लेनरक र उनका विद्यार्थी चार्ली क्लाइनले एक कम्प्युटर अर्को कम्प्युटर पहिलो पटक सन्देश पठाएका थिए । क्लेनरले विश्वविद्यालयको कम्प्युटर स्ट्यान्डफर्ड रिसर्च ईन्स्टिच्युटमा एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क (अर्पानेट) मार्फत सन्देश पठाएका थिए । यही अर्पानेट आज इन्टरनेटको रूपमा परिचित छ ।
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको लागि काम गर्ने विश्वविद्यालयहरू एआरपीए प्रविधि (अहिलेको डीएआरपीए) मार्फत अर्पानेटमा जोडिएका थिए ।
पहिलो सन्देश पठाउन संलग्नमध्येका एक क्लाइनका अनुसार त्यो बेलामा अमेरिकाका चार वटा विश्वविद्यालयसँग मात्रै कम्प्युटर थिए । त्यस्ता कम्प्युटर एउटा कोठा जत्रा थिए ।
क्लेनरक र क्लाइनले अर्को कम्प्युटर लगिन (login) भन्ने सन्देश पठाउन चाहन्थे । तर, उनीहरूले सन्देश पठाउन दुई अक्षर मात्रै लेखिसक्दा सिस्टममा समस्या देखियो ।
उनीहरूले लगिन भनेर पठाउन खोज्दा L र O अक्षर मात्रै पठाउन सके । अङ्ग्रेजीमा LO को अर्थ हेल्लो भन्ने हुन्छ । यो शब्द विशेषगरी कसैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा प्रयोग गरिन्छ ।
उनीहरूले पहिलो सन्देश पठाएको दुई वर्षपछि सन् २०७१ मा एमआईटीका अनुसन्धानकर्ता रे टोम्लिङसङ पहिलो इमेल पठाउन सफल भएका थिए । त्यो बेलामा पहिलो पटक इमेल एड्रेसमा @ प्रयोग भएको थियो ।
हामीले अहिले प्रयोग गर्ने वर्ल्ड वाइड वेब (www) प्रविधि भने १९८९ मा मात्रै आएको हो । बेलायतका कम्प्युटर वैज्ञानिक टिम बेर्नरले यसको आविष्कार गरेका हुन् । यही प्रविधिले हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन गरेको छ । बेर्नरले सन् १९९१ मा आफ्नो पहिलो वेब पेज बनाएका थिए ।
आजको प्रविधिलाई परिभाषित गर्ने यी प्रविधिहरू आविष्कार हुने बित्तिकै व्यापक प्रयोगमा आएका होइनन् । यो प्रविधिलाई व्यापक बनाउने काम भने अहिलेका चल्तीका प्रविधि कम्पनीहरूले गरेका हुन् ।
सन् १९९५ मा अमेजन, १९९८ मा गुगल र सन् २००४ मा आइट्युन र सन् २००४ मा फेसबुक जन्मिएपछि इन्टरनेट र वेब प्रविधिमा आमूल परिवर्तन आयो ।
अन्तराष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रबिधी समाचार
काठमाडौँ — फेसबुकले आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेको छ । फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत९सीईओ० मार्क जुकरबर्गले बिहीबार अब कम्पनीको नाम ‘मेटा’ रहने घोषणा गरेका हुन् ।
सीईओ जुकरबर्गले नयाँ नामले कम्पनीको भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताएका छन् । कम्पनीको नाम परिवर्तन भए पनि सामाजिक सञ्जालका नाम भने पुरानै रहने पनि उनले बताएका छन् । फेसबुकले इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र ओकुलस पनि चलाउँदै आएको छ ।
फेसबुकले अब सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा पनि आफ्नो काम विस्तार गर्ने जनाएको छ । जसका लागि नयाँ नाम चाहिएको पनि उसले जनाएको छ । फेसबुकले केही समय अगाडि मात्रै भर्चुअल रियालिटीका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी विकास गर्न लागेको ‘मेटाभर्स’ प्रोजेक्टका लागि युरोपमा १० हजार कर्मचारी नियुक्तिको तयारी गरेको घोषणा गरेको थियो ।
मेटाभर्सलाई ‘इन्टरनेटको भविष्य’ भनेर चर्चा गरिएको छ । कतिपयले यसलाई भर्चुअल रियालिटीकै परिष्कृत रूप पनि भनेका छन् । जसरी सन् १९८० को दशकमा ठूला–ठूला मोबाइल सेटलाई अहिले स्मार्टफोनले विस्थापित गर्‍यो, त्यसरी नै भर्चुअल रियालिटीलाई मेटाभर्सले विस्थापित गर्ने बताइएको छ । बीबीसीका अनुसार सबै प्रकारको डिजिटल प्रविधिलाई मेटाभर्सले जोड्ने काम गर्छ । त्यसका लागि अहिले कम्प्युटरको प्रयोग भए पनि मेटाभर्समा भने टाउकोमा लगाउने एउटा उपकरण९हेडसेट० प्रयोग गरिनेछ ।
अहिले भर्चुअल रियालिटी प्रायस् गरेर गेम खेल्नका लागि प्रयोग हुने भए पनि मेटाभर्समा भने खेल, कार्यक्रम आयोजना, चलचित्र हेर्न वा गफगाफका लागि समेत सहज हुने बताइएको छ । मेटाभर्स अहिले एउटा सोच भएकाले ठ्याक्कै यही हो भनेर परिभाषित गर्न कठिन हुने पनि प्रविधि विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विज्ञान तथा प्रबिधी समाचार
अफिसमा हुनुहुन्छ तर तपाईंको घरमा भएको कम्प्युटरमा भएको फाइल चाहिएको छ रु क्लासमा भएका बेला तपाईंको घरको कम्प्युटरमा भएको फाइल आवश्यक परिरहेको छ रु एक ठाउँमा बसेर कुनै अर्को ठाउँमा रहेको कम्प्युटरलाई एक्सिस गर्न असम्भव छ भन्ने सोच राख्नुभएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ, यसो गर्न असम्भव पक्कैपनि छैन । तपाईंले घरमा बसेर संसारको जुनै कुनामा रहेको कम्प्युटरसँग पनि सजिलै एक्सिस गर्न सक्नुहुन्छ । यसो गर्ने विभिन्न तरिकामध्ये हामी तपाईंलाई केही उपाय सिकाउन गइरहेका छौँ ।
तरिका नम्बर १ – विन्डोज रिमोट डेस्कटप (पिसी)
१) एक्सिस गर्न चाहेको कम्प्युटरको रिमोट डेस्कटपलाई इनेबल गर्नुहोस्
तपाईंले एक्सिस गर्न चाहेको विन्डोज पिसीमा रहेको सिमोट एक्सिसलाई इनेबल गर्नुहोस्, ता कि अरू कम्प्युटरहरूसँग कनेक्ट गर्न मिलोस् । यो फिचरलाई तपाईंले विन्डोज एक्सपी, भिस्टा, सेभेन वा एटको प्रोफेसनल वा इन्टरप्राइज भर्जनबाट इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईं र तपाईंले एक्सिस गर्न चाहनुभएको कम्प्युटर एउटै नेटवर्कमा वा राउटर, भिपिएनमा हुनुपर्नेछ ।
विन्डोज बटन र पज बटन एकैसाथ थिचेर सिष्टम मेनु खोल्नुहोस् । यसको अर्को तरिका स्टाट मेनुमा जानुहोस्, कन्ट्रोल प्यानल खोल्नुहोस्, सिष्टम एण्ड सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नुहोस् र सिष्टममा क्लिक गर्नुहोस् ।
विन्डोजको देब्रेपट्टि रहेको ‘रिमोट सेटिङ’मा क्लिक गर्नुहोस् ।
‘एलाओ रिमोट कनेक्सन टु दिस कम्प्युटर’ लेखिएको बक्समा ठीक लगाउनुहोस् । एडभान्स्ड सेटिङमा गएर तपार्इं आफूले चाहेअनुसारको सेटिङ परिवर्तनसमेत गर्न सक्नुहुन्छ ।
२) युजर एड गर्नुहोस्
तपाईंले कुन युजरले तपाईंको कम्प्युटरलाई बाहिर भएका बखत लग–इन गर्न सक्नेछन् त्यो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सेलेक्ट युजर’ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र एड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् । आफूले चाहेका युजरहरू अब एड गर्नुहोस् ।
३) सिष्टमको नाम पत्ता लगाउनुहोस्
तपाईं जब अरू कम्प्युटरमा बसेर कुनै रिमोट कम्प्युटर एक्सिस गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस कम्प्युटर सिष्टमको नाम थाहा हुन जरूरी छ । यो थाहा पाउन विन्डोज बटन र पज बटन एकैसाथ थिच्नुपर्ने हुन्छ र ‘कम्प्युटर नेम’मा थिच्नुहोस् ।
४)स्लिप मोड डिसेबल गर्नुहोस्
स्लिप मोडमा वा हाइबरनेटमा भएका कम्प्युटरसँग तपाईं कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले तपार्इंले सर्वप्रथम स्लिप मोड डिसेबल गर्नुहोस् ।
कन्ट्रोल प्यानल खोल्नुहोस् र पावर अप्सनमा किल्क गर्नुहोस् ।
चेन्ज प्लान सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्टिभ प्लानमा लिङ्क गर्नुहोस् ।
‘स्लिप एण्ड हाइबरनेट’लाई ‘नेभर’ सेट गर्नुहोस् । सबै काम सकिएपछि ‘सेभ चन्जेज’ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
५)कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्नुहोस्
तपाईंले कनेक्ट गर्न चाहनुभएको रिमोट कम्प्युटरमा लग–अ
तपाईंले कनेक्ट गर्न चाहनुभएको कम्प्युटरको ’सिष्टम नेम’ इन्टर गर्नुहोस् ।
तपाईंले कनेक्ट गर्दै गरेको युजर नेम इन्टर गर्नुहोस् ।
’सो अप्सन’ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र कनेक्सनका लागि एडभान्स्ड अप्सन ओपन गर्नुहोस् । साउण्ड, डिस्प्ले र बेस्ट पर्फरमेन्सका लागि यो अप्सनको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्न कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् । कनेक्सन प्रक्रिया पूरा भएपछि अर्को कम्प्युटरको डिस्प्ले तपाईंको कम्प्युटरको विन्डोजमा देख्न सकिन्छ । अब तपाईं सामान्य तरिकाले विन्डोजको प्रयोग गरी अर्को कम्प्युटरको कन्टेन्ट हेर्न वा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
६) पोर्ट ३३८९ को प्रयोग गरेर इन्टरनेट वाट कनेक्सन एलओ गर्न सकिन्छ
यदि रिमोट कम्प्युटरलाई सीधै इन्टरनेटबाट कनेक्ट गर्ने हो भने तपाईंले कनेक्ट गर्न चाहनुभएको कम्प्युटरको फायरवालमा ३३८९ पोर्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसो गर्नाले तपाईंंको रिमोट डेस्कटपलाई इन्टरनेटमा भेट्न सकिन्छ । अब तपाईंको डेस्कटपलाई जो कोहीले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसबाट बच्नका लागि तपार्इंले मजबुत पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ ।
७) तपाईंको रिमोट डेस्कटपलाई स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको सहायताले कनेक्ट गर्नुहोस्
यदि तपार्इं विन्डोज ८ वा ८।१ प्रोफेसनल चलाइरहनुभएको छ भने तपाईंको आइओएस वा एन्ड्रोइडमा भएको आधिकारिक माइक्रोसफ्टको एप प्रयोग गरेर रिमोट डेस्कटपसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि रिमोट डेस्कटप तपाईंको कम्प्युटरमा कन्फिग्योर गरेको हुनुपर्नेछ ।
तरिका नम्बर २ – टिम भ्युअर एनी
१) टिम भ्युअर डाउनलोड गर्नुहोस्
टिम भ्युअर एक फ्रि कम्प्युटर प्रोग्राम हो, जसले घरेलु प्रयोगकर्तालाई छिटै नै विभिन्न कम्प्युटरसँग रिमोट कनेक्सन सेट–अप गर्न सहयोग गर्दछ । यो प्रोग्राम विशेषगरी म्याक कम्प्युटरका लागि विकास गरिएको हो, जसको साहयताले रिमोट डेस्कटप कनेक्सन कन्फिग्योर गर्न मद्दत पुग्छ ।
डाउनलोडलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यहाँ भएको अल इन वान सेलेक्ट भर्जन वा अनएटेन्डेड एक्सिसका लागि स्पेसल टिम भ्युअर होस्ट भर्जन समावेश गरिएको हुन्छ ।
टिम भ्युअरबाहेक विभिन्न चर्चित प्रोग्रामहरू बजारमा भेट्न सकिन्छ । जस्तै वेबइएक्स, ल्यापलिङ्क, रियलभिएनसी, गोटूमाइपिसी आदि ।
२) रिमोट पिसीमा टिम भ्युअर इन्स्टल गर्नुहोस्
टिम भ्युअर इन्स्टल गर्ने बेलामा ’इन्स्टल अर रन टिम भ्युअर’ लेखिएको डायलग बक्स देखापर्छ । तपाईंले इन्स्टल अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ ।
‘सो एडभान्स्ड सेटिङ’ लेखिएको बक्समा टिक लगाउनुहोस्
‘पर्सनल÷नन–कमर्सियल’ युज अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्
लाइसेन्स एग्रीमेन्टलाई पढ्नुहोस् र एसेप्ट गर्नुहोस्
३) टिम भ्युअरलाई पछिको रिमोट कनेक्सनका लागि कन्फिग्योर गर्नुहोस्
इन्स्टलेसन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअधि ‘एस’लाई टिक गरेको छ या छैन पक्का गर्नुहोस् । टिम भ्युअर कन्फिग्योर भएपछि तपाईंले रिमोट कम्प्युटरलाई इन्टरनेटका माध्यमबाट जहाँकहीँबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।
“फुल एक्सिस” प्रदान गरिएको छ या छैन जाँच गर्नुहोस्, ता कि तपाईं जहाँ बसेर पनि रिमोट कम्प्युटरको एप्रुभलविना त्यहाँ भएका डाटा एक्सिस गर्न सक्नुहुनेछ ।
४) ‘अनएटेन्डेड एक्सिस’ सेटअप प्रक्रिया सुरू गर्नुहोस्
इन्स्टलेसन पूरा भएपछि “अनएटेन्डेड एक्सिस” सुरू हुन्छ । त्यस सेटअप प्रक्रिया पूरा गर्न एकपछि अर्को गर्दै स्टेप पूरा गर्दै जानुहोस् ।
तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरलाई एउटा नाम र पासवर्ड दिनपर्ने हुन्छ, ताकि तपार्इंको कम्प्युटर अनधिकृत व्यक्तिको एक्सेसबाट बच्न सकोस् ।
५) टिमभ्युअर एकाउन्ट बनाउनुहोस्
टिमभ्युअर एकाउन्ट बनाउनाले तपाईंलाई सजिलै कुन रिमोट कम्प्युटर अहिले अनलाइन छ र कनेक्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छ देखाउने गर्छ । एक पटक एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईंले कम्प्युटरलाई टिमभ्यूअरको लिस्टमा देख्न सक्नुहुन्छ ।
६) टिमभ्युअरलाई चलिराख्न दिनुहोस्
तपाईंले कुनै रिमोट कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्नका लागि टिमभ्युअर त्यस कम्प्युटरमा चलिरहेको हुनुपर्नेछ । टिमभ्युअर ब्याकराउण्डमा चल्ने गर्छ र एक्दमै कम रिसोर्स उपभोग गर्ने गर्छ ।
७) रिमोट कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्नुहोस्
एकपटक टिमभ्युअरलाई कन्फिग्योर गरिसकेपछि तपाईंले जनसुकै कम्प्युटरमा रहेर रिमोट कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ । यसो गर्न तपाईंले टिमभ्युअरको वेबसाइटमा लग–इन गरेर वा टिमभ्युअर सफ्टवेयरलाई तपाईंको कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न पनि सकिनेछ ।
रिमोट कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्नका लागि तपाईंले त्यहाँ लगइन गरेर पासवर्डको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
Mobile News Science विज्ञान तथा प्रबिधी समाचार
स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाईमा ७ लाख नागरिक, कहिले खुल्छ नयाँ आवेदन
काठमाडौं । सरकारी ढिला सुस्तीका कारण करिब एक वर्ष अघि नै लिखित तथा ट्रायल परीक्षा पास गरेका ७ लाख नागरिक अझै स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका छन् । लाइसेन्स छाप्न नसक्दा समयमै वितरण गर्न नसकिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
कोभिड १९ को महामारीको कारण देखाउँदै गत वैशाख १६ देखि स्थगित सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन आवेदन अझै खुल्न सकेको छैन । विभागका प्रवक्ता डा। लोकनाथ भुसाल प्रक्रियामा रहेका सात लाख नागरिकलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण नगरी नयाँ लाइसेन्स खुलाउन नसकिने बताउँछन् ।
‘अबको एक महिनामा १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्सका लागि कार्ड आयात गर्दै छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै सात लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न मात्रै कम्तिमा छ महिनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै यस अघि पास भइसकेका सवारी चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्नु हो ।’
विभागका अनुसार हालसम्म देशभर २० लाख प्रति स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिसकिएको छ । विभागसँग स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने एउटा मसिन मात्रै छ । जसले प्रति घण्टा ४५० प्रति तयार पार्ने क्षमता राख्दछ ।
२४ घण्टा सातै दिन मसिन सञ्चालन गर्दा समेत सात लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न करिब अढाई महिना लाग्ने देखिन्छ । यस बाहेक करिब ३० हजार जनाले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको भए पनि ट्रायल दिन भने पाएका छैनन् ।
यस हिसाबले प्रक्रियामा रहेका सबैलाई लाइसेन्स वितरण गरी नयाँ लाइसेन्स खोल्न छसात महिना लाग्ने विभागका प्रवक्ता भुसालको भनाई छ । ‘यद्यपि विभागले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन खोल्ने विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिन्न,’ उनी भन्छन् ।
त्यसो त विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेपछि एक वर्षे मान्य अवधि रहेको क्यूआर कोड सहितको लाइसेन्स समेत वितरण गर्न थालेको छ । प्रति घण्टा ४५० कै सङ्ख्यामा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नसक्ने क्षमता राख्ने यस्तो मसिन करिब सबै यातायात कार्यालयमा रहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
विभागका एक जना प्राविधिक अधिकृत क्यूआर कोडमा आधारित लाइसेन्सलाई नै स्थायी लाइसेन्सको रुपमा जारी गर्ने विकल्प समेत रहेको बताउँछन् ।
Science राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रबिधी समाचार समाज
काठमाडौं — सामान्यतया हामी फेसबुक त चलाउछौं, तर समय समयमा सेटिङ चेकजाँच गर्ने बानी हुँदैन । सुरक्षित रूपमा फेसबुक चलाउन यसको प्राइभेसी सेटिङ र अन्य जरूर कुराबारे ख्याल राख्नैपर्छ ।
फेसबुकमा प्रयोगकर्ताका असंख्य व्यक्तिगत विवरण हुन्छन् । तर सावधानी अपनाउन सकिएन भने साइबर अपराधीहरूले यस्ता विवरण चोरी गरि दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।
कमजोर पासवर्डका कारण मात्रै फेसबुक अकाउन्ट जोखिममा पर्ने भने पक्कै होइन । तसर्थ कम्तिमा पनि दुई महिनामा एकपटक प्राइभेसी वा गोपनीयतासम्बन्धी सेटिङ चेक गर्न आवश्यक छ ।
आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित गर्न केही समय छुट्याए मात्रै पुग्छ । फेसबुक अकाउन्टमा भएका के(कति सूचना तथा जानकारीलाई कसरी सार्वजनिक गर्ने, अथवा गोप्य राख्ने भनेर सेटिङ मिलाउन सकिन्छ ।
आज हामी कम्प्युटरबाट फेसबुकमा उपलब्ध जानकारी तथा सूचनालाई सन्तुलित गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे चर्चा गर्दै छौंस्
१। बलियो पासवर्ड राख्ने र टु फ्याक्टर अथेन्टिसियनको प्रयोग गर्ने
फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित गर्नका लागि पासवर्ड सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । फेसबुक अकाउन्ट असुरक्षित भएको खण्डमा सेक्युरिटी पेजमा गएर नयाँ पासवर्ड राख्न सकिन्छ ।
पासवर्ड राखेपछि अब टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अर्थात् टूएफए एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ । टूएफए एक्टिभ भएपछि तपाईंलाई अकाउन्ट लगइन गर्दा सेक्युरिटी कोड इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड धेरै पासवर्ड म्यानेजरले स्टोर गर्न सक्छन् । तसर्थ आवश्यकता अनुरुप गुगल अथेन्टिकेटरको प्रयोग गरी कोड स्टोर गर्न सकिन्छ ।
२। प्राइभेसी सेटिङ एन्ड टुल म्यानेज गर्ने
फेसबुकले अकाउन्टका लागि प्राइभेसी सेक्सन छुट्याएको छ । यसमार्फत आगामी दिनमा गर्ने पोष्ट तथा अपडेटहरूमा डिफल्ट सेटिङ राख्न सकिन्छ ।
क(कसले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन मिल्ने र सूचना हेर्न मिल्ने भन्ने निश्चित गर्न सकिन्छ । प्राइभेसी सेक्सनमा उपलब्ध सबै अप्सनहरू चेक गरी मिलाउन सकिन्छ ।
३। पुराना पोष्टहरू पव्लिक बाट हटाउने
फेसबुकमा उपलब्ध अपडेटका आधारमा व्यक्तिगत विवरण बाहिरिन सक्ने हुँदा पुराना पोष्टहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ । फेसबुकका पोष्टलाई प्राइभेसी सेटअप गर्न प्राइभेसी सेक्सनमा गइरहनु पर्दैन । टाइमलाइनमा गएर सोझै एक(एक गरी कसले हेर्न मिल्ने भनी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
४। अकाउन्ट लगइन भएका डिभाइस परिक्षण गर्ने
फेसबुक अकाउन्ट लगइन भएको डिभाइस लोकेसन र समय हेर्न मिल्ने व्यवस्था छ । सेक्युरिटी एन्ड लगइन पेजमा गएर अकाउन्ट लगइन भएका डिभाइस जाँच गर्न सकिन्छ ।
यदि उक्त लगइनहरू तपाईंले आँफै गर्नुभएको होइन भने रिपोर्ट गर्न र अकाउन्ट लगआउट गर्न सकिन्छ । यदि आफैं लगइन गरेको भएपनि लगआउट गर्नुपर्छ ।
५। फेसबुकको पहुँचमा भएका एपहरू जाँच गर्ने
फेसबुक अकाउन्टसँग लिंक गरी विभिन्न एपहरूमा अकाउन्ट चलाउन सकिन्छ । यसो हुँदा कतिपय एप फेसबुकले अस्वीकार गरेको हुन्छ, जुन सुरक्षाका हिसाबले जोखिमयुक्त भएका हुन्छन् । एप एन्ड वेबसाइटमा गएर एक्सपायर भइसकेका एप तथा वेबसाइट रिमुभ गर्नुपर्छ ।
६। लोकेसन हिस्ट्री डिलिट गर्ने
फेसबुकले प्रयोगकर्ताको लोकेसन डेटा प्रयोग गरी आफै नक्सा बनाउने गर्छ । लोकेसन सेक्सनमा गएर लोकेसन हिस्ट्री डिलिट गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाईं आफ्नो लोकेसन हिस्ट्री फेसबुकमा स्टोर नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने लोकेसन शेयरिङ बन्द ९टर्न अफ लोकेसन० गर्न सक्नुहुन्छ ।
विज्ञान तथा प्रबिधी शिक्षा समाचार
फेसबुक र इन्स्टाग्राम नेपालीमा कसरी चलाउने
काठमाडौं । विश्वका सर्वाधिक लोकप्रिय सोसल मिडिया प्लाटफर्ममा पर्दछन् फेसबुक र इन्स्टाग्राम । विश्वमा करीब साढे २ अर्ब प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुक विश्वका झण्डै १ सय १५ वटा भाषामा चलाउन सकिन्छ ।
इन्स्टाग्राम पनि अंग्रेजी सँगै अन्य धेरै भाषामा उपलब्ध छ । धेरै मानिसहरुलाई सोसल मिडियाहरुमा आफ्नो मातृभाषा नै प्रयोग गर्न सजिलो लाग्दछ । अंग्रेजीमा भन्दा आफ्नै बोलीचालीको भाषा प्रयोग गर्दा साथीहरुसँग गफिन तथा आफ्ना मनका कुरा अभिव्यक्त गर्न सहज हुन्छ ।
फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम चलाउनेमध्ये धेरैलाई यसको भाषा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने थाहा नै होला । तर यदि तपाइँलाई यी सोसल मिडिया प्लाटफर्महरुको भाषा नेपाल कसरी बनाउने भन्ने थाहा छैन भने यहाँ दिइएको उपाय अबलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ । तपाइँले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने फेसबुक वा इन्स्टाग्राममा भाषा परिवर्तन गर्दा तपाईँको कम्प्युटर, फोन वा अन्य डिभाइसको भाषा भने परिवर्तन हुँदैन ।
एन्ड्रोइड फोनको फेसबुक एपमा भाषा प्रयोग गर्ने तरिका
फेसबुक एप खोल्नुहोस्
दायाँतर्फको माथिपट्टि रहेको मेन्यु आइकनमा थिच्नुहोस् ।
त्यसको मुनिपट्टी रहेको ‘सेटिङ्स एण्ड प्राइभेसी’ अप्सनमा थिच्नुहोस् ।
त्यसमा आउने सेटिङ्स अप्सनमा गएपछि त्यहाँ रहेका विभिन्न अप्सनमध्ये ‘ल्याङ्ग्वेजेज एण्ड रिजन’ भन्ने अप्सनमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई फेसबुकमा कुन प्रयोजनको लागि कुन भाषा राख्ने भन्ने अप्सन आउँछ । त्यसमा गएर नेपाली वा आफूलाई इच्छा लागेको भाषा छनोट गर्न सकिन्छ ।
आईओएस फोनको फेसबुक एपमा भाषा प्रयोग गर्ने तरिका
आईफोनमा फेसबुक एप खोल्नुहोस् ।
त्यसपछि आउने अप्सनमध्ये ‘सेटिङ्स एण्ड प्राइभेसी’ मा जानुहोस् ।
त्यसपछि ‘एप ल्याङ्ग्वेजेज’मा जानुहोस् ।
यसको लागि अब आईफोनले डिभाइस सेटिङ्समा लैजान्छ । यहाँ तपाईँले फेसबुक एपको लागि इच्छा लागेको भाषा छान्न सक्नुहुन्छ ।
ब्राउजरबाट फेसबुकको भाषा परिवर्तन गर्ने तरिका
फेसबुक खोलेपछि दायाँ खण्डको माथिपट्टि रहेका आइकन मध्ये सबैभन्दा दायाँ भागमा रहेको तलपट्टि फर्किएको ‘ब्चचयध’ चिन्हमा थिच्नुहोस् ।
‘सेटिङ्स एण्ड प्राइभेसी’मा क्लिक गर्नुहोस् ।
त्यसपछि आउने सेटिङ्समा जानुहोस् ।
त्यसपछि ‘ल्याङ्ग्वेजेज एण्ड रिजन’ अप्सनमा जानुहोस् ।
फेसबुक ल्याङ्ग्वेजेज सेक्सनमा रहेको ‘इडिट’ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
अब तपाईँले आफूलाई इच्छा लागेको भाषा छान्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि सेभ चेन्ज भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस् ।
एन्ड्रोइड तथा आईओएसमा इन्स्टाग्रामको भाषा परिवर्तन गर्ने तरिका
एन्ड्रोइड वा आईफोनमा इन्स्टाग्राम एप खोल्नुहोस्
दायाँ साइडको तलपट्टि रहेको प्रोफाइल आइकनमा जानुहोस् ।
दायाँ साइडको माथिपट्टि रहेको मेन्यु आइकनमा थिच्नुहोस् ।
विज्ञान तथा प्रबिधी शिक्षा
क्यासनेप के हो ?नागरिकले क्यासनेपको आधिकारिक पेजमा किन जोडिने ?
२०७८, १४ असार सोमबार १८:४१
कपिल देब भट्ट दार्चुला:-बालबालिका तथा युवाहरु मा भएका प्रतिभा लाई राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय स्थर सम्म पहिचान,…
क्लब हाउसको लोकप्रियता बढ्दै
२०७८, १२ असार शनिबार १८:५२
करिब एक साताअघि मात्रै मैले पनि ‘क्लब हाउस’ मोबाइल एप मोबाइलमा डाउनलोड गरें । विशेषगरी सामाजिक…
गन्यापधुरा गाउँपालिकाले वृद्धि गरेर ल्यायो बजेट
जर्मनीका साहसिक साइकलयात्री : जसले १२ देश पार गर्दै नेपाल पुगे, अब बंगलादेश हुदै अमेरिका !
डडेल्धुरामा यसै वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन प्रधानमन्त्री देउवा
६ रुपैयाँ बढेर आयो पेट्रोलको मूल्य
February 2021 (424)
November 2020 (873)
डडेलधुरा समाचार समाज
२०७९, १० असार शुक्रबार २१:३३
डडेलधुरा राष्ट्रीय समाचार समाज
२०७९, १० असार शुक्रबार १६:००
राष्ट्रीय समाचार समाज
२०७९, ९ असार बिहीबार १६:५४
राष्ट्रीय शिक्षा समाचार समाज
२०७९, ३ असार शुक्रबार १९:१३
ठेगाना :- केन्द्रिय कार्यालय कृष्णपुर -१, कञ्चनपुर
सम्पर्क कार्यालय :- डडेलधुरा,धनगढी
दर्ता नं.जि.प्र.का कञ्चनपुर :-१२९-०७७/७८
स्थायी लेखा नं.- ६१३५५६९३४
फोन:- +977-9866100969 / 984-3879056
खबरदारी न्युज www.khabardarinews.com बहु भाषामा प्रकाशित हुने डिजिटल अनलाइन पत्रिका हो । खबरदारी न्युज साप्ताहिक पत्रिकाको नामबाट सञ्चालनमा रहेको छ । हामीहरु हजुरहरुको माझ सत्य, तथ्य तथा ताजा समाचारहरु उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । समाचार, लेख रचना तथा विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला । धन्यवाद !
अध्यक्ष : जनक महरा
प्रबन्ध निर्देशक : दिपक राज भट्ट
सम्पादक : देबकी कुमारी भट्ट
संवाददाता :देब जंग साँउद (कृष्णपुर) , बिर बहादुर सिंह (पुर्नवास), कपिल भट्ट(दार्चुला),एकेन्द्र चन्द (डोटी),दिपक ओझा (अत्तरिया),सुरेश धामी (बझाङ)
कानुनी सल्लाहकार : अधिबक्ता देब राज भट्ट
मार्केटिङ म्यानेजर : नरेश नाथ योगी (कैलाली)
Copyright © 2022 खबरदारी न्युज
| Design By :- Hari Karki |